साइकलमैत्री सहर बन्ने तयारीमा पोखरा :: सुनिता सिटौला :: Setopati
साइकलमैत्री सहर बन्ने तयारीमा पोखरा
सुनिता सिटौला पोखरा, पुस २४
साइकल र्‍यालीमा सहभागी बालक।
'आमाले पनि साइकल कुदाउने !' ५६ वर्षीय पार्वती रानाभाट जब साइकल लिएर निस्किन्छिन्, केटाकेटीहरू जिस्क्याउँछन्।
कति केटाकेटी त 'तपाईंलाई मै जित्छु' भन्दै प्रतिस्पर्धामै उत्रन्छन्!
अलि धेरै उमेरकाले साइकल चलाएको देख्दा अचम्म मान्ने त्यहीँ हुन्छ, जहाँ साइकलले तराईमाजस्तो प्राथमिकता पाएको छैन। पार्वती त्यस्तै ठाउँकी हुन् जहाँ साइकल पर्यटक वा युवा जमातको सोखका रूपमा बढी चिनिन्छ- पोखरा।
पार्वतीले पोखराका सडकमा गाडीका हर्न सँगै ट्रिङट्रिङ पार्न थालेको ४० वर्ष भयो। उनी सानो हुँदा पोखरामा गाडी खासै चल्थेनन्। गाडी भाडा महँगो थियो। साइकल भरपर्दो र सस्तो सवारी थियो।
'पहिले बाटो खाली हुन्थे, गाडीको डर हुँदैन थियो। अहिले ठूल्ठूला गाडी चल्छन्, डर हुन्छ,' कुनै बेला भरपर्दो साधनको अहिलेको जोखिम बताउँछिन् पार्वती, 'सरकारले साइकल यात्राका लागि बाटो व्यवस्थित गरे चलाउन सजिलो हुन्थ्यो।'
उमेरले ४० कटेका पोखराकै जय गुरूङ पनि साइकलमा आउजाउ गर्छन्। उनको साइकल यात्राले चार वर्ष पार गर्‍यो। तर उनलाई पनि पोखराका सडकमा साइकल यात्रा सहज लाग्दैन।
'यहाँ साइकल चलाउने धेरै छन् र साइकल मैत्री बाटो नभएकोले यात्रा जोखिम र असहज छ,' उनले भने।
यही असहजतालाई ध्यानमा राख्दै पछिल्लो समय साइकल अभियन्ताहरूले 'साइकल चलाऔं' अभियान सुरू गरेका छन्। काठमाडौं, वीरेन्द्रनगरसँगै पोखरामा पनि साइकल चलाउन प्रोत्साहन हुन थालेको छ।
स्थानीयबाहेक आन्तरिक र विदेशी दुवैखाले पर्यटक पोखरामा साइकल चलाउन रमाउँछन्। लेकसाइड वरिपरि साइकलमा घुम्नेहरू अझ धेरै रमाएको देखिन्छ। साइकलप्रतिको यही आकर्षणका कारण कतिपयले साइकल भाडामा दिएर जीविकासमेत चलाइरहेका छन्।
दैनिक आउजाउदेखि पर्यटनसम्म जोडिएको सहर पोखरामा साइकलको महत्व बुझाउँदै यसको प्रयोग गर्नेहरूको संख्या बढाउन सन् २०१२ देखि 'साइकल सिटी पोखरा' संस्था क्रियाशील छ।
संस्थाले 'टुर दी पोखरा' मार्फत विभिन्न नाराका साथ वातावरण प्रदूषण कम गर्ने कार्यक्रम आयोजना गर्दै आएको छ। 'टुर दी पोखरा' को मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य, वातावरण र पर्यटनको पाटोबाट साइकल प्रयोगप्रति आमरूचि बढाउनु हो।
यस वर्ष पनि पुस १३ गते शनिबार साइकल सिटी पोखराले 'टुर दी पोखरा' मार्फत साइकल र्‍याली गर्‍यो। र्‍यालीमा थुप्रै साइकल यात्री भेला भएका थिए। कसैले घरबाटै साइकल ल्याएका थिए भने कसैलाई संस्थाले नै दिएको थियो।
पाँचौ संस्करणको 'टुर दी पोखरा' कार्यक्रममा नेपाल आयल निगमका सदस्यहरू, हाँस्य कलाकार हरिवंश आर्चाय र मदनकृष्ण श्रेष्ठ तथा साइकल विज्ञहरूको सहभागिता थियो।
'थोपा, थोपा इन्धन बचाऔं' नारा बोकेको कार्यक्रम उद्घाटन कलाकारद्वय हरिवंश आर्चाय र मदनकृष्ण श्रेष्ठले गरेका थिए।
साइकल यात्रामार्फत वातावरण प्रदूषण कम गरी पोखरामा रहेको माछापुच्छ्रे, फेवाताललगायत प्राकृतिक सौन्दर्य संरक्षण गर्नुपर्ने, इन्धन खपत कम गर्न साइकलको भूमिका अत्यन्तै आवश्यक रहेको वक्ताहरूले बताए।
आयल निगम आफैंले इन्धन बेच्ने भए पनि यसको खपत कम गर्न जोड दिएको थियो। आयातको प्रमुख वस्तु इन्धन खपत कम गरेर व्यापार घाटा घटाउनुपर्ने निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलले बताए।
र्‍यालीमा सात-आठ वर्षका केटाकेटीदेखि पचास वर्ष नाघेकाहरू सहभागी थिए।
'प्रकृतिको नगरौं हरण, आऔं बचाऔं इन्धन', 'साइकल एक, उपयोग अनेक', 'इन्धन जोगाऔं, प्रकृति बचाऔं' जस्ता विभिन्न नारा अंकित प्लेकार्ड साइकलमा झुण्ड्याइएको थियो।
झण्डै ३० किलोमिटर दूरी तय गरेको र्‍यालीमा कास्कीसहित काठमाडौं, बाग्लुङ, स्याङ्जा, पर्वत, धरान, नेपालगञ्ज लगायत जिल्लाबाट सहभागिता जनाउनेहरू थिए।
पोखरा प्रदर्शनी केन्द्रबाट सुरू भएको र्‍याली पृथ्वीचोक, पोखरा बसपार्क, बुद्धचोक, रामबजार, अमरसिंहचोक, हस्पिटल चोक, रानीपौवा, महेन्द्र पुल, सिद्धार्थ चोक, भैरव टोल, बगर, पुरानो टुँडिखेल, हरिचोक, हेम्जा, मिलनचोक हुँदै हेम्जाकोटमा पुगेर सकियो।
कार्यक्रममा टुर दी पोखराका लागि सद्भावनादूत घोषित विशाल गर्बुजा र हालै सम्पन्न १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) मा साइक्लिङ प्रतियोगितामा रजत पदक विजेता जमुना थापालाई साइकल सिटी पोखराले सम्मान पनि गर्‍यो।
कायक्रममा साइकल कुदाउनेहरू उत्साहित थिए। साइकलको महत्व दर्शाउन अभियन्ताहरू मात्र लागि परेका छन् की स्थानीय निकाय पनि?
साइकल सिटी पोखराले पुस १४ गते केही विज्ञ र महानगरका प्रतिनिधि राखेर साइकल संवाद कार्यक्रम राख्यो। संवादमा साइकलको महत्व, फाइदा र अन्य देशको अभ्यासबारे छलफल भयो।
छलफलमा महानगर र साइकल सिटी पोखरा मिलेर पोखरामा साइकल लेनबारे अध्ययन गर्ने सम्झौता भएको पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसीले बताए।
पोखरा महानगरपालिकामा पनि बाटा विस्तार गर्ने क्रममा साइकल लेनको अध्ययन गर्न लागिएको हो।
'अहिले साइकल चालक संख्या बढेको छ। साइकल चलाउन प्रोत्साहन गर्नुका साथै यात्रीलाई सुरक्षित गराउन लेनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न लागेको हौं,' मेयर जिसीले भने।
साइकल सिटी पोखराको अध्यक्ष प्रकाश बज्राचार्यको अध्यक्षतामा साइकल लेन सम्भाव्यता अध्ययन कमिटी गठन भएको छ। उक्त कमिटीले पोखराको कुन–कुन सडकमा साइकल लेन बनाउन सकिन्छ भन्ने अध्ययन गर्छ।
फेवाताल वरिपरि, न्युरोड, चक्रपथलगायत ठाउँमा लेन बनाउन सकिने भनी साइकल सिटी पोखराले यसअघि नै महानगरलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ।
साइकल यात्राका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर काम गर्नुपर्ने प्रकाश बताउँछन्।
भौतिक संरचना बनाएर गर्दा खर्च बढी हुनुका साथै लामो समय लाग्छ। त्यसैले तत्कालका लागि भएका सडकमै रेखांकन गरिनेछ। २-२ मिटरको दुईतर्फी लेन बनाउने साइकल सिटी पोखराको योजना छ। कार्यान्वयनको पाटो, खर्च र उपयुक्त स्थान सबैको अध्ययन गरेर लेन बनाउनुपर्ने भएकाले यसका लागि लामो समय लाग्ने प्रकाश बताउँछन्।
सहरी यातायातमा साइकलको महत्व स्थापित गर्न यति बेला विभिन्न प्रयास भइरहेका छन्। साइकल मैत्री सहर, लेन विस्तार, स्ट्यान्ड निर्माण आदि बनाउने क्रम राजधानीको काठमाडौं, ललितपुर हुँदै पोखरासम्म पुगेको छ। देश संघीयतामा गएसँगै ठूला महानगर र नगरमा यातायात व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारे पछिल्लो समय स्थानीय सरकारबाटै प्रयास सुरू भएको देखिन्छ।
यातायात व्यवस्थापनका लागि स्थानीय निकायले पनि साइकल यात्रा नै सहज मानेका छन्। यसले भविष्यमा यातायात व्यवस्थापन हुनुका साथै वातावरण प्रदूषणमा कमी ल्याउने जनअपेक्षा पनि बढेको छ।
हामीकहाँ ऐन–नियम तथा योजना बने पनि कार्यान्वयन फितलो हुने समस्या देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा पोखरामा साइकल लेन कार्यान्वयन प्रभावकारी होला त?
पोखरा महानगरका प्रवक्ता धनबहादुर नेपालीका अनुसार साइकल लेनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन अरू गाडी छिर्न नमिल्ने गरी बनाउने तयारी भइरहेको छ।
'लेनमा साइकल अंकित चित्र बनाइने छ। साइकल लेनको दुरूपयोग नगर्नेबारे सुरूमा सूचना र चेतना जगाइने छ,' उनले भने, 'त्यत्तिले भएन भने कारबाही नै गर्ने योजना बनाएका छौं।'
प्रकाशित मिति: बिहिबार, पुस २४, २०७६, ०२:३७:००